Banyere anyị - Shan Dong Binuo Mechanics Co., LTD.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shan Dong Binuo Mechanics Co.,Ltd.
dị na Weifang Binhai, Shan Dong Province nke China nwere njem dị mma. Ogologo azụmahịa na ọrụ na-ekpuchi ụwa niile. Binuo Mechanics bụ ọkachamara nkewapụ ikuku nke na-etinye aka na nyocha, mmepe, nrụpụta, ire na ọrụ nke ikuku nkewa ikuku nitrogen, hydrogen na ọgbọ oxygen, na-enyekwa ahịa na ọrụ ndozi nke akụrụngwa corollary, dị ka compressors ikuku. ndị na-emepụta mmanụ dizel na mmiri na-ekpo ọkụ.
E hiwere Binuo Mechanics na 2018. Otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Suzhou, nke ọzọ na-ewu na Weifang. Ọtụtụ ndị injinia ọkachamara dị njikere maka ijere gị ozi. Niile ahịa na mgbe-ahịa otu bụ nnọọ ọkachamara, ahụmahụ na ọrụ.
Dị ka 2014
N'ihe dị ka 2014, ndị otu mbụ malitere itinye aka na ahịa, mgbe ire ere na nhazi nke ikuku compressors, na akara ụkwụ azụmahịa na ọrụ dị na mba niile. Na 2016, ndị otu mbụ kpọtụụrụ Takeda nke Japan ka ha kparịta na ịhazi nkwado nke teknụzụ PSA. N'afọ sochirinụ, ndị mbụ otu gara ịmụta PSA nitrogen na oxygen ọgbọ technology na Germany, ma gbalịa ghọta mgbanwe nke ụlọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu mbụ weghaara otu ndị ọkachamara ọkachamara na ndị ọkachamara na teknụzụ na igwe, ngwa eletriki na teknụzụ gas, ma were ọtụtụ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ dị ka ndị ndụmọdụ.
Ruo n'afọ 2018
Ruo 2018, Binuo Mechanics nyekwara na wuru mmepụta ntọala na ọkọlọtọ mmepụta ogbako, R & D center na nnyocha center na Suzhou High-tech Industrial Development Mpaghara, nke kpuchiri ebe 5000㎡. The Production isi na-elekwasị anya na ọkachamara imewe na mmepụta nke PSA na akpụkpọ ahụ nkewa nitrogen generator, PSA na VPSA oxygen generator, nitrogen na hydrogen ọgbọ na ọcha ngwá, wdg Ọrụ gụnyere chemical, ndu pharmaceutical, nri nhazi, ngwá electronic, roba taya, laser. ịcha, iko na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Na 2019, Binuo Mechanics malitere mbupụ, na ngwaahịa ndị bụ isi bụ PSA nitrogen generator, PSA oxygen generator na compressor ikuku. Ebupụla ya na Philippines, Vietnam, Japan, Malaysia, Pakistan na mba ndị ọzọ site na 2021. Ngwaahịa dị elu na ọrụ ahaziri nke Binuo Mechanics nwere afọ ojuju na ntụkwasị obi site n'aka ndị ahịa n'ụwa niile.
Na 2021, Shan Dong Binuo Mechanics Co., LTD. amalitela imekọ ihe ọnụ azụmahịa miri emi na ịkekọrịta teknụzụ na Atlas, Jiuding Refrigeration na Weichai Group. Iji meziwanye usoro ọkọnọ nkwado dị ugbu a wee bụrụ ebe nchekwa na ebe nchekwa nke PSA nitrogen generators, compressors air compressors, diesel generators and cool water chiller, Binuo Mechanics malitere ịhazi ma wuo ogbako ọhụrụ na Weifang site na nkwado nke Ụlọ Ọrụ Azụmahịa mpaghara.
Binuo Tech na Ọrụ
✧Binuo Mechanics agawo Takeda nke Japan maka mgbanwe teknụzụ PSA na imekọ ihe ọnụ kemgbe e guzobere na 2018;
✧Binuo Mechanics dechara asambodo ISO na 2018;
✧Binuo Mechanics nwere otu ọkachamara ọkachamara nke ihe karịrị afọ 10;
✧Binuo Mechanics anọwo na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ ọkachamara ụlọ & ụlọ ọrụ nyocha na kọleji iji mepụta teknụzụ na-aga n'ihu ma melite arụmọrụ ngwaahịa na ịdị mma.
✧ Ndị otu ndị na-ere ahịa nke Binuo Mechanics na-ahọrọ nyocha teknụzụ na mmepe, ọ ka mma ịnye ndị ahịa ntuziaka teknụzụ ọkachamara na ọrụ azụmaahịa mgbe ọ gasịrị;
✧Binuo Mechanics nwere otu ndị ọrụ na-ere ahịa mgbe ihe karịrị mmadụ 10 na-ejere ndị ahịa ozi n'ụwa niile. Ndị òtù ahụ bụ ndị ọkachamara nwere ihe karịrị afọ ise, ma nwee ahụmahụ nlekọta bara ụba na ụdị ngwá ọrụ na sekit niile, ọkachamara dị elu na àgwà ọrụ;
Otu ọrụ mgbe-ahịa
✧Binuo Mechanics mepụtara ihe ọkụkụ mbụ dị elu dị elu (99.99%) nitrogen generator na August 21, 2018, nke etinyere na Duratti Taya nke China;
Binuo Mechanics nwetara ọrụ mbụ buru ibu na Nọvemba 2018 site na Cynda Chemical nke China, wee nye usoro 4 nke igwe ikuku oxygen dị 165m³ yana usoro 5 nke 800m³ nnukwu igwe na-emepụta nitrogen ruo ugbu a.
✧April 2019, Binuo Mechanics bupụrụ ihe ọkụkụ mbụ nke nitrogen na ụlọ ọrụ igwe na Vietnam;
✧Onye ahịa mbụ na mba ofesi mgbe niile bụ ụlọ ọrụ na-emepụta nri na Japan. Binuo Mechanics wetara ha 2 tent nke nitrogen generators na 4 nke ikuku compressors maka afọ abụọ sochirinụ.
✧Binuo Mechanics nwere nkwado ogologo oge na Atlas, Ingersoll Rand, American Sullair, China Deman na China Dehaha;
✧N'ihe dị ka afọ 2014, otu ndị ọrụ Binuo Mechanics malitere itinye aka na ahịa na ọrụ mmezi nke ikuku compressors na akụrụngwa corollary.
✧Binuo Mechanics rere screw compressor nke mbụ na ụlọ ọrụ ugegbe na China.
✧Binuo Mechanics bupụrụ ihe mkpuchi ikuku mbụ na ụlọ ọrụ na-ahazi nri nke Philippines na 2019.
Ebe ọ bụ na Binuo Mechanics hibere, anyị ererela ụwa niile ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku igwe ikuku ma na-edozi ọtụtụ puku ọrụ nlekọta ruo August 2021.
Ọdịiche Dị Mma Iguzosi Ike N'ihe Mmeri Mmeri
Nchụso ụlọ ọrụ
Mechanics Binuo na-eme ka ndị ahịa na-eri obere ego maka otu ngwaahịa, na-emesi obi ike maka otu àgwà ahụ, ihe ụtọ maka otu ọrụ ahụ.
Aha mbụ Onye ahịa mbụ Quality mbụ
Teknụzụ mbụ Ọrụ mbụ
Atlas Copco Ngp, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen osisi, Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen, Ọgbọ ike hydrogen,